विज्ञान Archives - नागरिक रैबार::Nagarikraibar.com विज्ञान Archives - नागरिक रैबार
सजिलो छैन कोरोनाभाइरसविरुद्ध खोप बन्न !
विश्वलाई हावाकावा खेलाइरहेको कोरोनाभाइरस महाव्याधिको प्रकोपलाई रोक्ने सबैभन्दा बलियो उपाय के होला ? यो प्रश्नको एउटै जवाफ आउँछ खोप । त्यो खोप कहिले बन्ला भन्ने प्रश्नको उत्तर चाहिँ सजिलो छैन । वैज्ञानिकहरुको मतमा भरपर्दो खोप आउनको लागि १ वर्षदेखि डेढ वर्षसम्मको समय लाग्न सक्छ । कोरोनाको प्रकोपले रन्थनिइरहेकाहरुका लागि त्यो समयावधि आफैंमा एउटा लामो समय […]
समाचार नेपालका ११ वर्षीय बालकले पत्ता लगाए छुद्र ग्रह